Maxaad ka taqaanaa maleeshiyada Cali Qaran ee Shabaabka la dagaallanta? - BBC News Somali
"Waxaa nagu kalifay Alshabaab markii ay ummadda dhibaateeyeen dadka waxgaradka ah, culimaa'udiinki iyo malaaqyadi la gowracay oo dadki la baab'iyey hantidoodina faraha lagala baxay oo lagu takrifalaya iyada oo la leeyahay Saka iyo waxaasaa la qaadayaa", ayuu yiri Cali Abduullaahi Diiriye oo ah hoggaamiyaha maleeshiyadaas oo BBC uga warramay
" ilaaiyo hadda dhawr mar oo ay na soo weerareen oo aan iska caabbinnay iyo deegaanki annaga aan iska aasaasnay oo ay ka fogaadeen, xoolihi ay naga qaadi jireen iyo dadki la gowrici jiray oo loo soo dhici jiray oo aan ka badbaadnay, wax badan baa noo nabad galay" ayuu sii raaciyey Cali Cabdullaahi Diiriye.
Mileeshiyadan oo aasaaskeegi ugu horreeyey looga yeeri jiray 'Cali Qaawane' magacaasi ayey maleeshiyadu muddo kaddib u baddaleen Cali Qaran.
Image caption Maleeshiyada Cali Qaran ee Bakool
"Marki hore 'Cali Qaawane ayaan la baxnay' marki aan nimanki iska caabbinnay wax saka ah iyo wax xadgudub ah nagula sameeynin, magacan cusub ee 'Cali Qaran' waxaa noo bixiyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed cabdullaahi Farmaajo" ayuu yiri.
Image caption Qaar kamid ah dagaalyahanada Macawisley
Maleeshiyaadka "Macawisley" ayaa dhowrkii sano ee ugu dambeeyay dagaal kula jiray ururka Al-Shabaab ee bartamaha Soomaaliya.
Ninkii hoggaamin jiray "Macawisleyda" ayaa lagu dilay weerar Shabaab iyo malleeshiyada ku dhexmaray degmada Aaadan Yabaal, bishii Oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay.
Maqaal: Nabadeynta Soomaaliya ma waxay ku xirantahay wadahadal lala galo Al Shabaab?
Hadal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo siyaabo kala duwan loo fasiray
Shirka ka hortaga rabshadaha ku salaysan xagjirnimada oo Muqdisho lagu qabtay